Daawo: Meydadka dadkii lagu laayay Bariire oo Muqdisho la keenay – Warfaafiye:
Daawo: Meydadka dadkii lagu laayay Bariire oo Muqdisho la keenay
Waxaa magaalada Muqdisho la keenay meydad iyo dhaawacyo dad xoogsato ahaayeen oo ciidamada Kumaandooska ee loo yaqaan Bangaraafta Soomaalida iyo kuwa Mareykanka ay ku dileen habeen hore deegaanka Macalinka oo 18 KM u jirta Afgooye una dhaxeeya Afgooye iyo Bariire.
Meydka shan ruux iyo Shan kale oo dhaawac ah ayaa la dhigay Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho., iyadoo la sheegay ina meydad kale la soo wado, waxaana weerarka lagu eedeeyay ciidamada Mareykan iyo Soomaali wadajira.
Howlgal ka dhacay degaanka Macalimka una dhow Bariire ayaa waxaa fuliyey ciidamo ku degay Diyaarad Helikobtarro ah iyadoo laayey dad fara badan, horena u watay 3 qof oo midkood dhaawac ahaa.
Afhayeenka wasaaradda amniga ayaa sheegay in howlgalka laga fuliyay Sh/hoose lala beegsaday saldhig ay Alshabaab halkaasi ku lahaayeen, loona geystay qasaare badan, laakiin xildhibaanno iyo mas’uuliyiin ku heyb dadkan oo Isbitaalka Medina kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in dad shacab ah lagu laayay weerarka.
Arrintan ayaa lagu tilmaamay inay tahay xasuuqii labaad ee Bariire ka dhaca, iyadoo weerarkii hore ay dowladda Federaalka magdhow ka bixisay.